Umhla My Pet » Wazi njani ukuba wena Ukhoyo Love?
ukubuyekezwa: Sep. 23 2020 | 3 min ukufunda
Ndikhumbula okokuqala ndawa eluthandweni. Kwaye ndiyacinga inyaniso mhlawumbi ukuba uyazi oko entliziyweni yakho nangoko. Uyazi ukuba umahluko phakathi bonke abo ixinzelelwa kunye komnqweno kwafuneka abantu kunye nendlela ovakalelwa ngale umntu. Xa esithi, ukuba uyazi mba- ukuya izizathu ezimbalwa mna zidweliswe apha ngezantsi.
Xa ubona umntu omthandayo wena ezininzi bakho basesichengeni. Ufuna ebonwabisayo, kuchukunyiswa, kubenza bonwabe. Bathi baphelelwe isipaji wabo umzekelo nguwe lowo wokuqala ngelayo. Yaye ayikho ngaloo ndlela 'Hayi, loo mntu ulihlwempu ezilahlekileyo isipaji yabo.’ Yinto nzulu ngaphezu koko. Aninako ukuzithwala into embi yenzeka kubo. Ba lungile kakhulu umntu into embi ukuba kwenzeke kubo. Baya andikulingene into embi ukuba kwenzeke kubo. Bandivulele kuni ukuya iimvakalelo ukuba wacinga akazange aphile kwaye yinto ebalulekileyo kakhulu kunoko bendilindele. Uqalisa ukuba ungene umculo abathand. Awunokwazi, nje kunokuba sisiqalo incoko. Ke ukuba yinto ezingabuyekezekiyo, bayibenjalo. Uvuyo ufumana ngendlela ovakalelwa ngayo siqhuba nayiphi na ukwaphuka (okanye akanangqondo kufuphi!) ukuba uziva kuba awukwazi angenazo. Nalapho kuye ababuthathaka elichithwe yonke ngazo yeyona ndlela iphambili uyakuyazi kwaye ndisazi ukuba uya bonke amaphupha enu ukuba abe kunye nabo. Ndicinga ukuba mhlawumbi ukuba ndithe ndazi kuba mna yebhongo kwaye yinto yokugqibela Ndifuna ukuba sibotshiweyo abaselula kodwa ukuba usaya kuba wayefuna nam umva kwaye wayefuna ukuba sihlale phantsi ndiyazi ngelo xesha ndiya kuba kuye mna ndiyazi andiyi kuyenza ukuze wonke umntu.
Ukuthetha ngazo Rhoqo
Le ubunzima ngenxa unako oku abantu ukuba abantu endandinomdla ngokugqithiseleyo kodwa kungunobangela ndimthanda kakhulu. Nto nje ukuba ukongeza ezinye izinto kolu luhlu xa uthandana ngokuchaseneyo sele ababethanda. Ndikhumbula ndithetha kakhulu ukuba udade wam ngale ou Ndathandana kunye. Andizange amxelele kodwa wayesazi. Waye wavuma ukuba wenza kweminyaka emva ngokuba andiyi ezo zandi-up ngendlela emangalisayo, indlela funny yena, ukuba uhlobo yena, indlela Ndingathanda kuquka nam, lowo uneentloni, incoko.
Singaphezulu Happy By Them Ukubonisa ingqalelo
Ewe, ungenza uvuya kakhulu ngumntu izibiliboco ebonisa naluphi na uhlobo ukuhoywa kodwa ke xa umntu omthandayo ukuba ngaphezu koko. Kuvakala ndifana uxhulumaniso. Kubomi babo ba bethetha nawe! Zeziphi izandi kancinane lusizi kodwa yendalo xa ubona umntu omthandayo kuba kubabona abafezekileyo apho awuboni wena abafezekileyo. Ke xa umxelela igama lakho kuvakala ngathi uncuthu. Ngathi eyona nto imangalisayo ukuba endakha weva. Xa ndithi uxhulumaniso kunokuba uqhagamshelo kunokwenzeka uthando kodwa ukuba loo nto ezingabuyekezekiyo, kunokuba uqhagamshelo ubuhlobo. Loo nto, ukuba abathanga Ndiyakuthanda, kodwa uyabathanda usafuna nabo ebomini bakho kwezinye amandla kwaye ukuba engaphendulekiyo nokuba bekuya kuba imeko omhle ehlabathini kodwa ngokuqinisekileyo indlela iimvakalelo zabantu emsebenzini umdlalo.
Kukho ndilangazelela anzongonzongo ibandla labo naxa ucinga ukuba kuze sibabone kwakhona kukho le imvakalelo ezingenanto ngaphakathi. Yinto endandikuyo ngokwenene. Ngoko ke, ukuba unemouse iziselo ezimbalwa, kuba kubi. Uqala bedanduluka. Kwaye mhlawumbi ubuya kuziva ngathi ukuba ngaphezu ndandithabatheka. Yeyona uzive engenanto yokungabi nabo ubomi bakho kwaye uziva ingathi ubomi bakho akusoze uza kugqitywa ngaphandle kwabo. Ngathi oko ubomi isiqingatha. Yonke into ukuphumeza uya Akukhathaliseki. Kodwa ufumana kuloo. Yinto indlela ende kodwa ukuza kuni ngaphandle kwelinye icala.
5 Iindlela ukuba Yiba Tech Amahlwempu